lundi, 05 novembre 2018 18:52
Ambondromamy ny nofo mangatsiakan'i Mgr Victor io tolakandro io. Nandalo tao amin'ny Ekar.
Tsy ela dia ho tonga Mahajanga.
lundi, 05 novembre 2018 14:42
Mahajanga: Zaza tsy ampy taona namono nahafaty mpianatry ny Oniversite
Voasambotry ny Polisy ireo efa-dahy tompon'antoka nahavanon-doza ary nandray anjara mivantana tamin'ny famonoana ilay tovolahy mpianatry ny oniversiten'i Mahajanga teny amin'ny bloc administratif Ampisikina ny 21 oktobra lasa teo.
Raha tsiahivina ny zava-nisy, ny harivan'io 21 oktobra io, dia niaraka nanao connexion internet avy amin'ny Wifi an'ny sampandraharaha iray ao amin'ny Bloc i Jimmy sy ny namany no nisy enin-dahy (6) nanendaka ny findainy ary nanindrona antsy azy, izay nitarika tamin'ny fahafatesany.
Tsy mbola ampy taona ny roa lahy amin'ireto jiolahy ireto.
lundi, 05 novembre 2018 14:19
Mgr Rakotondrajao Victor Solo: Halevina ao amin'ny Katedraly Mahajanga amin'ny zoma tolakandro
Androany maraina no niala teto Antananarivo ny.nofo mangatsiakan'i Evekan'i Mahajanga Mgr Rakotondrajao Victor Solo, taorian'ny Sorona Masina fanaovam-belona sy ho fialantsasatry ny Fanahiny tao amin'ny Ekar Antanimena-Antananarivo.
Ny zoma 9 novambra tolakandro no hanaovana ny fandevenana azy ao amin'ny Katedraly Mahajanga.
Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teto Antananarivo, teo amin'ny faha-58 taonany i Mgr Rakotondrajao Victor Solo, rehefa notsaboina tao amin'ny Clinique des sœurs Ankadifotsy.
lundi, 05 novembre 2018 14:16
Fampielezan-kevitra: Mitaraina ho niharan'ny sabôtazy ny kandida Rajaonarimampianina
Tapaka nandritra ny.fotoana naharitra ny herinaratra teny amin'ny Coliseum Antsonjombe nandritra ny faradoboka nataon'ity kandidan'ny HVM amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity omaly alahady 4 novambra.
Tapaka ihany koa ireo haino aman-jery nampita nivantana izany faradoboka izay. Sabôtazy no nandraisan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina ireo trangan-javatra ireo.
lundi, 05 novembre 2018 14:11
Pesta: Nisy tranga roa mampiahiahy tao Ranomafana-Ifanadiana
Eo ampiandrasana ny.valin'ny fitiliana nalefa any amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao Ifanadiana mialoha ny hanamarinana fa tena pesta ireto tranga roa ireto.
Voaray an-tanana ara-potoana ireo marary nahazo fitsaboana.
Fifidianana: Farany vao tsy manara-dalàna ireo Kandida hafa
Ireo Kandida milaza fa vaventy, ary mampiasa vola be, dia hatrany amboalohan'ny fampielezan-kevitra, dia tsy laitran'ny fananarana amin'ny tsy fanarahan-dalàna, ny CENI, ny HCC moa dia tsy nahitam-peo hanitsy na anasazy mihitsy.
Efa andro farany, na ora farany amin'ity alatsinainy ity, izay hifaranan'ny fampielezan-kevitra, dia indrisy fa nirona any amin'ny tsy fanarahan-dalàna ihany koa ireo kandida hafa, izay niezaka nanara-dalàna ihany teo aloha, raha ny fametahana afisy. Nefa dia ireo toerana natokana amin'izany, dia babangoana, fa eny amin'ny andrin-jiro sy vatakazo indray no lasa ametahana an'izany.
lundi, 05 novembre 2018 09:32
Mahalavolona-Andoharanofotsy: Tezitra amin'ny tsy fisian-drano lava ny mpanjifa
Nanao fanangonan-tsonia ary niazo ny masoivohon'ny Jirama eo Andafiatsimo ny mpanjifa mitaky ny hamahana io olana io maika.
lundi, 05 novembre 2018 09:31
Kitra: Baraingo ny fifidianana filohan'ny Federasiona
Namoaka fanambarana ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra tamin'ny alalan'ny filohany, Randriamiasasoa Doda, fa tsy afaka tanterahana amin'ity alatsinainy 5 novambra ity ny fifidianana filohan'ny Federasiona (FMF). Hivory anio ny "Comité exécutif" hamaritra ny daty hanatontosana io fifidianana io.
Tamin'ny sabotsy 3 novambra 2018 no tokony natao tao Sambava io fifidianana io fa tsy raikitra satria tsy tratra ny fetr'isa. 15 farafahakeliny ny mpifidy ilaina, izay filohan'ny ligy eto Madagasikara, dia 14 amin'ny 22 no tonga.